Dhulkan maahan iib - Geofumadas
Dhulkani kuma aha iibka
Disember, 2017 cadastre
Tani waa maqaal xiiso leh oo uu qoray Frank Pichel, kaas oo uu ku falanqeynayo qiimaha dheeraadka ah ee amniga sharciga ee lagu dabaqay guryaha. Su’aasha bilowga ahi waa mid xiiso leh oo aad run u ah; Waxay i xasuusinaysaa booqashadaydii ugu dambaysay ee aan ku imid aagga ay deggan tahay Granada ee Nicaragua, halkaas oo guri qurux badan oo gumaysi ahi macno ahaan ugu yaallo qoraallo ah "hanti isku dhac ka jirta, ha iibsan dhibaato", oo ay ku xigto guriga xiga ee leh fallaadho tilmaamaya guriga ku xiga oo leh "tuugo , Waxay dhaceen gurigeyga ».
Maqaalka dhamaadka ah waxaa loola jeedaa sahan muuqaal ah kaas oo heerka qiyaasta amnigeenna lagu cabiri karo.
Ma rabtaa inaad iibiso hantidaada dhaqaale horumar leh?
Saar calaamada iibka.
Ma rabtaa in aad gurigaaga ku hayso dhaqaale soo kordhay?
Saar calaamada iibka NO.
Sawirada muujinaya in aan la iibin dhulka ayaa sii kordhaya inta badan gudaha xeebta ku yaala Nigeria ilaa Tansaaniya.
Waxa uu sharxayaa dalabka sii kordhaya ee dhulka Afrika oo idil iyo sidoo kale nidaamyada fowdo ama nidaam aan nidaamsanayn ee maamul goboleed oo sii wiiqaya amniga iyo kobaca dhaqaalaha.
Dhulka ayaa weli ah hantida ugu qiimaha badan uguna yar ee ugu badan Afrika. Baanka Adduunka ayaa qiyaasaya in boqollayda 90 ee dhulka Afrika ee aan sharciyeysneyn. Iyo inta badan haweenka iyo ragga Afrika waxay ku tiirsan yihiin dhulkan, kuwaas oo aan lahayn xuquuq xaq u leh, guryahooda iyo hab nololeedkooda.
La'aanta cadayn xuquuqda dhulka - iyo sidoo kale waraaqo been abuur ah oo inta badan la socda dalka nidaam sax ah - waxay ka dhigan tahay in mararka qaarkood dadku iibsadaan dhul qof aan ahayn qofkii lahaa run. Inta badan waxaa jira dalka updated ama dadweynaha ma ay bixiyaan ah diiwaangelinta hay'ad dawladeed oo rasmi ah, taas oo ka dhigeysa in wax iibsadaha xiiso aan sinaba si loo xaqiijiyo in ay wada xaajoodyo iibka hantida leh dadka kuwaas oo run ahaantii hantidaan. Sidaa darteed, dadka dhulka leh waxay mararka qaar la kulmaan maalgashadayaasha bixiyay lacag aad u fiican si ay dhulkooda uga soo iibsadaan qof aan laheyn xuquuqda hantida. Tani gaar ahaan waa dhibaato waayo, kooxaha la liido, gaar ahaan haweenka, kuwaas oo sida caadiga ah haysan warqadaha sharciga ah ee xuquuqda dhulka iyo, isagoo carmallada inta badan dadka kale kuwaas oo ku andacooday lahaanshaha sharci ah dalka ay ku nool yihiin ama way qarxaan.
aqoonsi sii kordhaysa ee doorka aasaasiga ah ee xuquuqda dhulka ee horumar waara sameynayo dawladaha ayaa wajaheysa tartan la Liberia, Ghana iyo Uganda, oo dhan ka shaqeeya horumarinta nidaamka xuquuqda dhulka.
Toddobaadkii hore, madaxweynaha Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, ayaa u sheegay golaha kacdoonka Cagaaran ee Afrika ee ah in qaaradda ay sii wadi doonto in ay ka careysiiso gaajo iyo macluul illaa ay wadamada u siiyeen beeralayda yaryar amniga iyo fursadda ay u baahan yihiin si ay u maalgashadaan dalalkooda ayna horumariyaan dalaggooda iyaga oo xoojinaya xuquuqda dhulkooda.
Haddaba, a sahanka cusub interactive caawinaysaa si loo muujiyo dhibaatada iyo saameynta ay xuquuqda dhulka aan ammaanka ku saabsan ilaalinta, ammaanka, yareeynta saboolnimada iyo awood-siinta dhaqaale ee haweenka Africa iyo wixii ka dambeeya.
Post Previous" Hore TopView - Codsi ku saabsan sahaminta iyo saamaynta dhulka
Post Next Koorsooyinka ugu fiican ee QGIS ee IsbaanishkaNext »